Abaxhasi bamachiza amayeza, uMvelisi weeMveliso eziSebenzayo waMayeza-Thenga i-API- Medicinerawmaterials.com
Ilitye eliluhlaza > iimveliso > Izithako zoMayeza
yethu izithako zoxubo mayeza, amayeza ekrwada asetyenziswa ekwenziweni kwamalungiselelo ahlukeneyo, sisithako esisebenzayo ekulungiseleleni. Isetyenziswa njengeyeza lokunyanga, ikristale, isicatshulwa, njl., Elungiselelwe ngokudityaniswa kwemichiza, ukutsalwa kwezityalo okanye i-biotechnology.
Kuphela ndinako API Ukuqhubekekiswa kumalungiselelo amayeza kuya kuba liyeza lesicelo seklinikhi.
bonke izithako ezisebenzayo zoxubo mayeza kuthi kufuneka ihlolwe ngokungqongqo yi-HPLC, yi-GC okanye yi-UV, iqinisekisa ukuba icocekile. Amayeza, isondlo, kunye nezithambiso ezenziwe ngezinto zethu zoxube mayeza zisemgangathweni kwaye zithembekile.
Uluhlu lwezithako zamayeza
Ikhompyuter ye-HPMC K100M
Ngokomthombo wamayeza ekrwada, siwahlulahlulahlulahlulwe sibe ziindidi ezimbini eziphambili: iziyobisi ezenziwe ngamachiza kunye neziyobisi zendalo.
Iziyobisi ezenziwa ngamachiza zinokwahlulwahlulwa zibe ngamachiza enziwayo kunye nezinto eziphilayo zokwenziwa. Iziyobisi ezingaphiliyo zizinto ezingaqhelekanga (izinto ezimbalwa), ezinje Aluminium hayidroksayidi kwaye i-magnesium trisilicate Unyango lwezilonda esiswini kunye nezilonda; Amachiza elektroniki elenzelweyo afumaneka kwizinto ezisisiseko zeekhemikhali ezilungiselelwe ngothotho lwempendulo yeekhemikhali (ezinje nge aspirin, chloramphenicol, icaffeine, njl.).
Iziyobisi zamachiza zendalo zingahlulwa zibe ngamachiza e-biochemical kunye neziyobisi ze-phytochemical ngokwemithombo yazo. Amayeza okubulala iintsholongwane aveliswa kukuvundiswa kweentsholongwane kwaye abakwicandelo lebhayoloji.